သန်းကြွယ်သူ​ဌေး​တွေဆိုတာကို ​မေ့​မေ့သွားတတ်တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ ဖြစ်ရပ် ၄ ခု | News Bar Myanmar
သန်းကြွယ်သူ​ဌေး​တွေဆိုတာကို ​မေ့​မေ့သွားတတ်တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ ဖြစ်ရပ် ၄ ခု
1. Jisoo ရဲ့ “ကျွန်မမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး”
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေ Lisa ရဲ့ ​ဇာတိ​မြေဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွား​ရောက်လည်ပတ်တုန်းက Lisa က ထိုင်းစကားအချို့ကို အဖွဲ့ဝင်​တွေကို သင်​ပေးခဲ့ပါတယ်။ Lisa သင်​ပေးလိုက်တဲ့ စကား​တွေက​တော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါ​ပေမဲ့ Jisoo က​တော့ “ကျွန်မမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ အရိုးထဲ စွဲ​နေ​အောင် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ​နောက်​တော့ အဖွဲ့ဝင်​တွေ ​စျေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါမှာ ရယ်စရာ​ကောင်းစွာပဲ Jisoo ဟာ ဒီစကားကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ​ပြော​ခဲ့ပါတယ်။
2. ဒိတ်လွန်​နေတဲ့ နို့ဆီကို စားမိတဲ့ Jennie
Jennie ဟာ တစ်ခါတုန်းက စ​တော်ဘယ်ရီသီး​တွေကို ဒိတ်လွန်​နေတဲ့ နို့​ဆီစမ်းပြီး စားလိုက်မိပါတယ်။ ဗီဒီယိုကို ရိုက်​ပေး​နေတဲ့ Jennie ရဲ့ အ​မေဟာ နို့ဆီက ဘာမှမဖြစ်​သေးဘူး စားလို့ရ​သေးတယ်လို့ ​ပြောခဲ့တဲ့အတွက် Jennie ဟာ အ​မေရဲ့စကားကို နား​ထောင်ပြီး စားလိုက်ပါတယ်။ ထို့​နောက် သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း နို့ဆီက အရသာမဆိုး​သေးဘူးလို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။
3. ​ဒေတာသုံးစွဲမှု​ကြောင့် ​ရှော့ခ်ရသွားတဲ့ Rosé
Rosé ဟာ တစ်ခါက Instagram မှာ Live လွှင့်ရင်း ဝင်လာတဲ့ message ​ကြောင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ message က​တော့ ​ဒေတာသုံးစွဲမှု သတိ​ပေးစာပါ။သူမဟာ အိမ်က WiFi ကို မသုံးမိပဲ Live လွှင့်​နေတဲ့တစ်​လျှောက်လုံး ​ဖုန်းဒေတာကို သုံးစွဲ​နေမိတဲ့အတွက် ဝယ်ထားတဲ့ ပမာဏရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က လကုန်​ခါနီးဖြစ်တဲ့အတွက် ​ဒေတာ​ကြေးထပ်သွင်းရ​တော့မှာမို့ Rosé တစ်​ယောက် ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါ​သေးတယ်။
4. ဝန်ထမ်း​တွေကို ​စျေးဆစ်​ခဲ့တဲ့ BLACKPINK
BLACKPINK HOUSE ရဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာ ​BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ အိမ်သုံးပစ္စည်း​တွေကို ဝယ်ယူခဲ့ကြပြီး ​ဒေါ်လာ ၇၀၀ ​ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ ထို​ငွေပမာဏ​ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်​တွေ အံ့အားသင့်သွားပြီး ဆိုင်ဝန်ထမ်း​တွေကို ​စျေး​လျှော့​ပေးဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားပါ​တော့တယ်။ ဝန်ထမ်း​တွေကို ပြုံးပြလိုက်၊ ချီးမွမ်းလိုက်၊ Lisa ဆို ရယ်စရာအက​တွေ ကပြလိုက်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့​ပေမဲ့ ​နောက်ဆုံးမှာ ​discount အစား လက်​ဆောင်​ပေးတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တစ်အိတ်စီနဲ့ ​​ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
Next အဆိုးမြင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ငိုခဲ့ရဖူးတဲ့ မင်းသမီးလေး Dilireba »
Previous « မေလအတွင်း အလုပ်အသစ်များလက်ခံရရှိခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ